ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ထိပ်တန်း 10 အမျိုးသမီးများအွန်လိုင်းဆက်သွယ်ခြင်းသည့်အခါအမှားတွေအမျိုးသားများ Make
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 11 2021 |5မိဖတ်ပြီးသား
အမှား #1: ပဲ '' သူမ၏များပေးပို့ခြင်း’ တစ်ဦး Wink
အများစုမှာအင်တာနက်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်ပို့ကြကုန်အံ့ “မျက်တောင်ခတ်” သို့မဟုတ် “ပြပွဲစိတ်ဝင်စားမှု” အခမဲ့.
သို့သော်ဤသင်နှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ဘာပြောသလဲ?
ကယ့်ကိုပူပြင်းမိန်းကလေးကသင့်မျက်တောင်ခတ်တဲ့အခါ, သူမသည်ကျော်ခက်ရင်းခွရန်သူမ၏ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်လိုသောအလေးအနက်မယ်ကောင်လေးနှင့်လည်းစျေးပေါမြင်သည် $10 အဖွဲ့ဝင်ကြေးကို.
သူမလည်းတဲ့မျက်တောင်ခတ်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူကြောင်းသိတယ် “ရဲထွက်”. ဘယ်သူမဆိုလှုပ်ရှားအရာရာမှာအွန်လိုင်း profiles များအားလုံးနှင့်မျက်တောင်ခတ်ရာပေါင်းများစွာအားဖြင့် scroll နိုင်.
ဒါကြောင့်, သူမ၏ရှုထောင့်ကနေ, နေ့တိုင်းသူမ၏အစစ်အမှန်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဖို့အချိန်ယူယောက်ျားတွေများစွာရှိပါတယ်သည့်အခါအဘယ်ကြောင့်သူမသည်သင်တို့အပေါ်မှာအချိန်ပေးသင့်ပါတယ်?
အမှား #2: သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းမှာလတ်တလောအရည်အသွေးဓာတ်ပုံဘဲ
ဒီတစ်ခုလွယ်ကူဖြစ်သင့်, ဒါပေမယ့်အချက်ဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးလူတို့သည်မိမိတို့၏ဓာတ်ပုံ upload တင်ကြဘူး. ဒီတစ်ခုပေါ်တွင်စာရင်းဇယားအလွန်ကြည်လင်သော. ရဓာတ်ပုံများနှင့်အတူ profiles 10 မရှိသူတွေထက်အဆပိုရူပ; နှင့်အရည်အသွေးဓာတ်ပုံများနှင့်အတူပရိုဖိုင်းရ4ဆင်းရဲသောသူကိုဓါတ်ပုံနှင့်အတူ profiles များအားလုံးထက်အဆပို.
ငါ့ကိုအသင်မေးပါစေ. သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ site နှင့်ရှာဖွေရေးပေါ် log သည့်အခါ, သင်ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ profile တွင်ဓါတ်ပုံနှင့်အတူမိန်းမတို့အဘို့ရှာဖွေပါဘူး?
အမျိုးသမီးအများစုကသင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်၏မယားကဲ့သို့သင်၏ဓာတ်ပုံ N post မည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ပုန်းဖို့တစ်ခုခုရှိသည်ဟုယူဆပါလိမ့်မယ်.
သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံမကြိုက်ဘူးဆိုရင်, ဖန်ဆင်းတဲ့ professional တဦးရှိသည်. ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ profile ကိုအဘို့ကြီးသောဓါတ်ပုံဖန်တီးများစွာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်.
သင်တို့ကိုထိုအရပ်၌အခြားယောက်ျားတွေဆန့်ကျင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်ချင်တယ်ဆိုရင်, အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံ upload.
Oh, တစ်ပိုသည်အလွန်အရေးကြီးသည် note ကို N သင်မကြာသေးမီဓာတ်ပုံ upload တင်ကြောင်းသေချာပါစေ. အဘယ်အရာကိုမျှတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်ထိုသူတို့သင်တို့ကိုစေလွှတ်ရုပ်ပုံကိုသူကနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ထက်ပိုပြီးစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည် 20 နှစ်နှင့် 40 ပေါင်လွန်ခဲ့တဲ့!
အမှား #3: ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရပ်နှင့် message တစ်ခုကိုပေးပို့ခြင်း
အချက်အလက် #1: ယောက်ျားတွေအများဆုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်အနည်းဆုံးလူနှစ်ဦးကိုတဦးတည်းမှအားဖြင့်မိန်းကလေးများတာဟာကြောင်းကို၎င်း, တစ်ဦးရှေးရိုးစွဲအရေအတွက်င်.
အချက်အလက် #2: အကောင်းရှာဖွေနေမိန်းကလေးများမည်သည့်ပေးထားသောသောနေ့ရက်ကာလ၌ Wink နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများစွာရ.
လွယ်ကူသော. နောက်ထပ်တစ်ခါ, ကောင်းအွန်လိုင်း profiles များအားလုံးနှင့်အတူအမျိုးသမီးနေ့တိုင်း Wink နှင့်မက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးရ.
သူမ၏ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်လှစ်ရန်အကြောင်းပြချက်ပေးပါ! ဒါကြောင့်အားလုံးတခြားသူတွေတို့တွင်အထွက်ရပ်ရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်ပါကဖျက်ပစ်လိုက်တဲ့ရရှိမှုမြင့်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိပြီးမျှမဘတ်ဘူး.
သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကို၏ကျန်ရေးသားခြင်းတွင်သင်သည်ပြုအဖြစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာကို subject crafting နည်းတူအချိန်အများကြီးဖြုန်း.
သူမ၏မေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးပါသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်သူမကဖတ်ရုံသူမ၏ရုပ်ရည်ထက် သာ. အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတကယ်တော့သင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူမ၏ profile တွင်အချို့သောအသေးစိတ် reference.
စာမကျြနှာ: 123